Heshiis Taariikhiya oo dhex maray shirkada SAWA petroleum ee Somaliland iyo dalalka Cumaan iyo Imaaraadka. | Salaan Media
Heshiis Taariikhiya oo dhex maray shirkada SAWA petroleum ee Somaliland iyo dalalka Cumaan iyo Imaaraadka.
Waxaa dhawaan ka dhacay hudheelka (Grand Hyatt) ee dalka Cumaan heshiis ganacsi oo ay kala saxeexdeen shirkada SAWA petroleum oo ay leeyihiin mulkiilayaal ka soo jeeda Somaliland iyo shirkadaha saliida soo saar ee dalalka Cumaan iyo iskutaga imaaradka carabta.
Heshiiskan oo u soo qabanqaabiyay Hussein al-ishaqi ahna madaxa horumarinta mashaaricda Africa, ayaa waxa goob joog ka ahaa madaxda shirkada SAWA petroleum oo la kala yidhaa Ahmed Shakir Qaadi Maxamad oo sidoo kale madax u ah machadka Hamilton college ee Sheffield, Abdul Qafar iyo Adam Sawahili oo isaguna ah mareeye Israa Community sheffiled. Iyadoo dhanka kalena ay goob joog ka ahaayeen gaashaanle sare Faaruuq, sheikh Khalid Alrawaas, Mareeyaha hudheelka Grand Hyaat, xoghayaasha wasaaradaha caafimaadka iyo gudaha iyo sidoo kale mareeyaha guud ee shirkada shidaalka Cumaan.
Waxa xusid mudan in Shirkadan SAWA petroleum oo ka ganacsata Saliida, shidaalka una iibgaysa geeska Africa gaar ahaan Jabuuti, Somalia, Somaliland, Kenya, Sudaan iyo Ethiopia ay dhawaan furi doonto saamiyo loogu talo galay dhamaan ummadda Somaaliyeed ee ku kala dhaqan daafaha dunida oo dhan.